#ဂွေးသီးနဲ့#ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖူးသူများ #သတိ #အစိုးရ #ကို #လှန်မကြည့်နဲ့။ | democracy for burma
#ဂွေးသီးနဲ့#ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖူးသူများ #သတိ #အစိုးရ #ကို #လှန်မကြည့်နဲ့။
tags: လိုအပ်ရင် ခုတုံးလုပ် အသုံချမယ် ။, အစိုးရ ကို လှန်မကြည့်နဲ့။, ဂွေးသီးနဲ, Burma, Crackdown, MOE Thee Zun, Moethee Zun, MTZ, Myanmar, Phyoe Phyoe Aung, Protest, student
ဂွေးသီးနဲ့ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖူးသူများ သတိ
အစိုးရ ကို လှန်မကြည့်နဲ့။
လိုအပ်ရင် ခုတုံးလုပ် အသုံချမယ် ။
ဂွေးသီး မြန်မာပြည် ပြန်ဝင်ခွင့် ဘယ်သူပေးခဲ့တာလဲ ။
ဂွေးသီး ကို တရားစွဲထားတာ ရဲက ဘာကြောင့် ခေါ်မစစ်ခဲ့တာလဲ ။
ဂွေးသီး မြန်မာပြည် အနှံ့သွားခဲ့တယ် ။
အစိုးရ ခွင့်ပြု ချက်နဲ့ 
ဂွေးသီး အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ ဆုံခဲ့တယ် ။
ရဲက ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ လိုက်ယူထားတယ် ။
ဗဟိုအစိုးရ လွှတ်တော် နဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေက
လက်ခံထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး လှုပ်ရှားမှုကို
ဂွေးသီးက နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တဲ့
သဘောထားတွေ ရေးလာကြပြန်ပြီ ။
၁၉၈၈ ထဲက ဂွေးသီးကို ဗကပက စင်တင်တယ် လို့ ကြားဖူးတယ် ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဂွေးင်္သီးကို ထောက်လှမ်းရေးက စင်တင်ဖို့ 
ငွေထုတ်ပေးတယ် လို့ ကြားဖူးတယ် ။
ကျောင်းသားတပ်တွေက ပြည်တွင်း နယ်စပ် ဆက်စပ်နိုင်ဖို့ 
ပြည်တွင်းက လူသိများတဲ့ ဂွေးသီးကို စင်တင် ပေးတယ် ။
၂၀၀၃ နောက်ပိုင်း အမေရိကန်မှာ ဂိန်နေတဲ့ ဂွေးသီးကို
မြန်မာပြည်က အတွင်း သတင်းပေးပြီး စင်တင်တယ် ။
၂၀၁၁ မှာ မိုးသီးကို မြန်မာပြည် ပြန်ဖိတ်ပြီး စင်တင်တယ် ။
၂၀၁၂ မှာ လူသတ်မှု သမိုင်းတွေ ပေါ်လာပြီး ဂွေးသီး
၂၀၁၅ မှာ ဂွေးသီးကို ပညာရေးလှုပ်ရှားမှု နောက်ကွယ်က
ဆရာကြီး အဖြစ် လော်ဘီတွေက စင်တင်ပြန်ပြီ ။
ဒီလောက် အတွေးအခေါ်လေးနဲ့ 
လူထုကို ဦးဆောင် လော်ဘီလုပ်နေရင်
တိုင်းပြည် ပျက်ဖို့တော်တော် နီးလာပြီ ။
နိမိတ်ဖတ် သလို တနေ့ တခြား ပီပြင်လာနေပြီ ။
ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့သလို ဖြစ်လာနေပြီ ။
အရှေ့တရုပ်က ဖိ
ရှိတဲ့ ဗမာ အနောက်က ကုလားအောက်မှာ တဲ့ ။
အစိုးရ နဲ့လူထု
တပ်မတော်နဲ့ကျောင်းသား
ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့တိုင်းရင်းသား
နလံမထူ နိူင်ဖူး ။
သန်း ၂ ထောင် ကြားက တိုင်းပြည်
ဘာပြသနာမှ မရှိဖူး ။
အစိုးရ မှားတာကို ထောက်ပြနေသူတိုင်း
ဂွေးသီး တပည့် လို့ ရေးနေတာတွေ
ရပ်ကြပါတော့ ပုဇွန် ဦးနှောက်လော်ဘီတွေ ။
Thway Thit Sar
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးပါဆိုပြီး သပိတ်မှောက် မမှောက် ခင်ကပေါ့… သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ပါ ဆိုသူတွေ အားလုံးက မိုးသီးဇွန်နဲ့ တွြေ့ပီး လက်ချာတွေယူ plan တွေ ဆွဲခဲ့ကြတယ်…
စဉ်းစားလို့ မရတာက… အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးလို့ ကြွေးကြော် သပိတ်မှောက်တယ်… ဒါပေမယ့် အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ဖို့ထက်… ရန်ကုန်ကိုချီတက် ဆန္ဒပြဖို့က ဘာကြောင့် ပို အရေးကြီးနေရတာလဲ?
သူတို့ပြောသလို အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ လာပြီး ညိုနှိုင်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ပါ လို့ ဖိတ်ခေါ်ထားတာကို တောင် သွားမပြင်ပဲ… ဘာကြောင့် ရန်ကုန်ကို သပိတ်စစ်ကြောင်း ပုံစံအတိုင်းချီတက်ချင်နေကြတာလဲ?
သူတို့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က သူတို့ကြွေးကြော်ခဲ့သလို မြန်မာပြည် ပညာရေး စနစ် ပြောင်းလဲ ဖို့ အတွက် ဆိုပြီး အမျိုးသားပညာရေး စနစ် ပြင်ဆင်ချင်လို့လား? ဒါမှ မဟုတ် ရန်ကုန်ကို သပိတ်စစ်ကြောင်း အတိုင်းချီတက်ပြီး ပြသနာရှာချင်လို့လား?
နောက်ပြီးသူတို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်တွေက အားလုံးဖြစ်နိုင် ရဲ့လား? ဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပဲ တောင်းဆိုခဲ့ကြတာလား? သူတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေက တကယ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပညာရေး မြှင့်မားရေး အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရဲ့လား?
အဲဒီလို မေးခွန်းတွေနဲ့ ဒီပုံတွေကို ဆက်စပ် စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်… နားယောင်ခဲ့မိလို့ အသုံးချခံ ကျောင်းသား စစ်စစ် လူငယ်လေးတွေ ကို သနားမိပါရဲ့….
(မှတ်ချက် – လာပြီး စောင်းမြောင်း/ဆဲဆို/ဖင်ပိတ်ငြင်း… မယ့်သူတွေ အပေါ်က မေးခွန်းအားလုံးကို အရင်ဖြေဆိုပါ)
from → Burma, MOETHEE ZUN, MYANMAR, student protest
← #ELEPHANT #DAY #THAILAND #สวัสดี #วันช้าง #ไทย
#ကိုးကန့်ဒေသ မြင်ကွင်း.. #တရုတ်ရုပ်သံ #clip →